Iibisi eziyimfuneko ngeendawo ze-aphrodisiac
Ingqiqo edelelwe ixesha elide ukuba yonke ingcaciso, kunye ne-90% yayo, echaphazela iimvakalelo zethu, ifumaneka ngombono wokunuka, oko kukuthi. ngeempumlo. Ngaba kuvela ukuba uvakalelo luthando okanye ukungathandeki luxhomekeke ngqo kwivumba? Kodwa iphunga liyakwenza ngokufanayo kumadoda nabasetyhini.
Ukuthunga kunye nokuziphatha ngokwesini ... Kukho uxhulumano olusondeleyo phakathi kwabo. Umntu onengqondo ephucukileyo yokuphosa, iingxaki kwisicwangciso sesondo, njengomthetho, akafundi. Kodwa xa kwenzeka ukuba ngenxa yesizathu esithile awuncedwa ngongcamango lokunuka kwinqweno yesondo kunye nakwixesha lezenzo zesondo, iinjongo zitshitshisiwe, ke ngenxa yezi njongo zikhona ii-oyile ezibalulekileyo ezinempahla yomrabi.
Amafutha e-Ethereal athatha ama-receptors kwaye oku kukhuthaza ukubizwa kweentlanzi kunye nokukhululwa kwe-endorphins. Le hormone yolonwabo olwandisa umnqweno wesini, kwakunye neemvakalelo eziye zenzeka ngexesha lezenzo zesondo, lunokuba lunomdla, ukukhwabanisa kunye nokuziphatha. Le miphumo ayinakuvakalelwa nje ngexesha lokubilisa iioli eziyimfuneko ngeempumlo, kodwa ngokunxulumene nesikhumba. Okwangoku, ioli efunekayo, ephethe impahla ye-aphrodisiac, isoloko isetyenziselwa ukufeza umzimba.
Iioli eziPhambili zePhysics
Ngokuncedwa kwale mafutha, izigulane zangasese zangaphakathi zikhutshwe. Ukuphucula inkqubo yokujikeleza, ukuthintela i-ejaculation yangaphambi kokuqala, ukuphelisa ukucoca, kukhuthaza ukunyuswa kwesondo, kunye nokwandisa amandla. Kulezi zityalo zikhutshwa ngamafutha e-aphrodisiac-verbena, i-clove, i-vetiver, i-jasmine, i-ginger, i-ylang-ylang, i-geranium, i-nerol, i-muscat, i-myrtle, i-palmrosa, i-juniper, i-patchoula, i-sandalwood, i-citronella.
Amafutha e-Psychotropic ayimfuneko
Ndiyabulela kumafutha anikwe ama-aphrodisiacs, ukhenketho lwezesondo luya kuphuculwa, kwaye uvelwano lwe-aerogenic kunye nesondo luyanda. Nazi ezinye izityalo apho kuveliswa khona ioli: i-lame, i-mandarin, i-marjoram, ipineyini, i-sage, i-bergamot, i-rosewood, isiqhumiso, imisedare, i-orange, i-grapefruit kunye ne-Ichbretz.
Impembelelo yeoli efunekayo ye-aphrodisiac ayikho nje ukunyuka kwetoni kunye nokuzonwabisa. Nazi ezinye iingenelo zalo mveliso:
Ukususwa kweetekisi ezisuka kumzimba
Ukwandiswa kwamandla amakhulu
Ummiselo weenkqubo zeentlungu kunye ne-endocrine
Ukuhlaziya kunye nokuvuselela isikhumba
Ukuphucula inkqubo yehommoni
Ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi kwimizimba ye-pelvis encinci
Uncedo kwimfazwe ekuchaseni ukungabi namandla nokungcola
Ii-oyile-aphrodisiacs kunye neempahla zabo
Ukukhethwa kwamafutha abalulekileyo, ukuba neendawo ze-aphrodisiac, kunene kakhulu. Kuye kwiBhunga ukubeka ikhethelo kubo kulabo abaya kuvuselela intshisekelo yomsindo kunye nokukhuthaza umnqweno. Yenza uvakalelo lwakho lube lukhulu, ubanikeze ukuphindaphinda okukhulu kunye nokuthanda.
I-degree ephezulu phakathi kwayo yonke ioli ye-aphrodisiac inokunikezwa kwi-ylang-ylang. Okokuqala, siyakucebisa ukuba uqaphele kule oli. Iphunga layo le-prisuschy shades leentyatyambo leentyantyambo. Ukuqhathaniswa kwamakha amanqabileyo, uyakwazi ukuvuselela ubunqweno kunye nokudala umnqweno wokukhulula, ukubonelela ngokukhethekileyo imidlalo yokuzonwabisa.
Njengomthetho, isetyenziswe ngokubhekiselele kumasundu omnxeba ngenjongo yokuphucula umzimba kunye nokutshatyalaliswa kwamandla ngokwesini. Okuvuyisayo, ukuvuselela umnqweno, ukususa ingxubevalo yexhala, i-oyile kwi-bergamot ivulela umnyango phambi kwezinto ezifihliweyo.
Ioli ye-orange entle
I-Aromatheo inamandla kangangokuba ukusuka kwiminithi yokuqala umnqweno wokwenza isanda. Ukubonakaliswa okukhawulezayo kokuzimisela, iqhinga kunye noxinzelelo ... Lo busuku kuya kukhunjulwa ixesha elide.
Ioli yeCarnation yiphunga lempumelelo. Ukuqhumisa ngesiphunga esinjalo, uya kuphepha ukusilela kwesicwangciso sesondo. Umzimba, ukusabela kule ngqungquthela, iya kuba yintliziyo kwaye ilungele ukuvakalelwa okuqhakazileyo, yintoni i-orgasm ende.
Le iphunga linakho ukukhuthaza amaqabane omabini ngexesha elifanayo, kwaye nangona kunjalo, emva koko, le oli iphezulu ngaphezu kwesilisa, kwaye ibalwa kubafazi abasemdala nabasenamava. Iphunga le-geranium likhusela kwiingcamango eziqhelekileyo, liza kubuyisa umva wolutsha kwaye luya kubangela ukutshatyalaliswa kokuthandana.
Iyakwazi ukuphelisa ubanda kunye nokungabi nantoni kwiintlobano zesini. Ukunciphisa kunye nokunceda ukunqoba ukwesaba, i-jasmine i-oli izakuqhelanisa imvelaphi ye-hormonal, yomeleze isidima somntu, sincede ukulawula ukunyuka kwexesha elide, ukufumana ulonwabo, ujabule olungonwabi kunye nokunyamekela.
Ioli ye ginger
Maslombirya ithathwa njengendoda. Igalelo ekuqiniseni amandla, ukuxolisa. Inika ukuzimisela nokuzithemba kwizenzo, kunika amandla, njengokungathi kubangela ukutsha.
Ivuselela, ibuhlungu kunye neentsimbi zayo, ezinokumomeleza iimvakalelo nokubuyisela amandla, ukukhuthaza umsebenzi wesondo. Ioli yeCinnamon yenza ubudlelwane bokukhanya, kodwa ngexesha elifanayo lugubungela le ubudlelwane kunye ne-puzzle.
Ibhotela ye marjoram
Leoli iyinyani - iyakwazi ukwenza nayiphi na i-super-lover, oya kuba yinkcazelo, enobubele, kunye nokucokisa, kwaye uya kuziva ukuba uyintombi. I-marjoram iphunga inokukwazi ukuphucula ubuqhetseba bobuhlobo be-zonoboy.
Leoli yinto ephunga le-plasticity kwiimpawu zomzimba ezingaziwa. Iphunga lakhe elimnandi njengoko lishukumisela ukuphunyezwa kwezilingo ezintsha zesondo, iingxaki nezenzo. Ioli yeJuniper iya kuqinisa amandla abantu kwaye ayiyi kuyeka ixesha elide, ukubuyisela nokuqhubeka nokwakhiwa.
Ioli ye Neroli
I-Masleneroli iqinisa amandla, ivuse iintliziyo kwaye ivuselele ukunandipha kwe-orgasm, kwaye idala ukuvumba komoya ochanekileyo, iya kususa ukucasuka nokuxhatshazwa. Leli hulo linconywa ukuba lisebenze ngokuxhatshazwa ngezocansi. Abasetyhini abaziva bexinezelekile okanye abanesifo se-premenstrual syndrome bayakhuthazwa ukuba baveze iphunga leoli.
Leoli, kunye nephunga layo elincinci nelinenqabileyo, lifanelekileyo kakhulu iqabane elincinane nelingenakuqhelaniswa kwimicimbi yothando. Iphunga leoli evukile liya kubangela uvuyo lwentliziyo kunye nokuthuthumela kwintsebenziswano. Le phunga liyakwazi ukunikela ithoni kwi-uterus kwaye ibe nefuthe elihle kwimisebenzi yokuzala kaNadzhen.
Igadi zeRose: I-Dolce Rosa Excelsa iphunga elivela kwiDolce neGabbana
Izimonyo zaseKorea nge-snake kunye ne-cock extract: yintoni engcono?
Icandelo 1. Ukusetyenziswa kwamacids kwi-cosmetology: i-hydroxy acids
I-cosmetology yezobugcisa kunye neempawu zokuzicoca
Umlawuli wokuhlobisa uGuerlain Spring Glow 2016
I-Orange sauce yee-pancakes
Isaladi "Eyesithathu" evela kwitshalo seqanda
Unyaka we-Tiger: i-horoscope yezikali
Iholide efanelekileyo kumfazi wendlu
Indlela yokucoca impahla yekhanda ekhaya
Ukunyangwa kwezifo kunye namazambane
Jam ukusuka kwiplamu
Isobho se-Lentil kwi-multivariate
I-plum ipake nge-walnut
I-osteoarthritis ye-ankle: iimpawu, unyango
I-jam engavamile ukusuka kwiiponisi zepine: zokupheka ngezinyathelo kunye neefoto
Izifo zokuqala ezingabonakaliyo zabantwana